Microneedle RF --lọ ọrụ - China Microneedle RF Manufacturers, Suppliers
afọ Microneedling RF ikpo okwu ihu eweli akpụkpọ rejuvenation Microneedle RF
1. Pinxel-2 nwere aka anọ, Fractional RF handle (Non-invasive), Micro-needle RF handle (invasive), isi jụrụ oyi, na polar na-adịghị mma.
2. A na-eji igwe a eme ihe maka ihe otutu, ụcha, ahịhịa, nhichapụ ụcha, Nweghachi Skin, Nnukwu Mbelata Pore na ngbanwe nke anụ ahụ, na-ebuli ihu, na-eme ka akpụkpọ ahụ sie ike.
3: Igwe a nwere ọnọdụ Bipolar na Mono-polar mode usoro ọgwụgwọ abụọ, imirikiti China RF igwe nwere naanị bi-polar mode. Na ọnọdụ Mono-polar, ike RF dị ike karị. Ọ bụrụ na iji Mono-polar mode, onye ọrịa kwesịrị ijide polar handpiece na-adịghị mma
RF akpụkpọ tightening igwe microneedling RF agịga ihu ihu eweli igwe
Ngwa Ngwaahịa Karịsịa na-emeso akpụkpọ tightening
periorbital wrinkles akpụkpọ rejuvenation
arụ ọrụ na-emetụta ahụ ọkụ na-ebuwanye ibu
otutu otutu sebum secretion
hyperhidrosis / osmidrosis gbatịrị akara na na.
Mee ka akpụkpọ gị sikwuo ike - Microneedle RF na-ebuli igwe
Pinxel-2 RF microneedling technology rụrụ dị ka ọ bụla Nde (ma ọ bụ ọbụna dịanyā) nwere ike, n'ezie na-akpali gị ahu collagen na elastin etoju na-emeso ndị dị elu ihe ịrịba ama nke ịka nká. Akpụkpọ ahụ dị obere, na-akawanye njọ. Na ederede, ụda na nghọta, Smoothed, na-enwu enwu ma dịwanye mma.
Kacha ọhụrụ Microneedle RF Fractional Equipment ọtụtụ pinxel-2 RF igwe ihu na-eweli
Ike RF na-eme ka akpụkpọ anụ ahụ dị ike, na-eme ka mgbochi na ịmịkọta anụ ahụ, yana nkwalite nke collagen na mmepụta elastin. N'ihi na a na-ewepụta ike RF miri emi, ọ nwere ike rụpụta nsonaazụ ngwa ngwa nke dị egwu karịa.
Microneedle RF A Ntughari Ntughari-Ntughari Ntughari Ntughari Ntughari Ntughari
Pinxel-2 Microneedling acha uhie uhie SRF
N'enweghị nsogbu & n'ụzọ dị irè na-agwọ ụdị anụ ahụ niile
Treatmentzọ ọgwụgwọ atọ ezubere maka isi, ihu, na ahụ
Ndụdụ agịga anaghị amachi ọnụ ọgụgụ zuru ezu
Ugbo ala robotic nke na-esote maka ahụmịhe nke ahụike
Enwere ike inyefe ọgwụgwọ 25% ngwa ngwa
Obere ego a na - akwụ ụgwọ nwere ike ime ka ROI dịkwuo mma
Nzuzo RF Microneedling RF na Fractional RF.
Pinxel-2 Nzuzo RF bụ usoro ihe ntanetị nke redio redio (RF) nke microneedling maka coagulation anụ ahụ na hemostasis ezubere iji kpalite ma mezigharịa collagen ma lebara akara ngosi nke ịka nká anya. Ọ dabara adaba maka ndị ọrịa chọrọ ime ka anụ ahụ ha dịghachi ndụ na ụdị anụ ahụ niile. Site na ịkpụzi micro-agịga, RF nzuzo nwere ike ịnapụta ike n'ọtụtụ dị omimi, ka e wee hazie ọgwụgwọ iji lebara nchegbu onye ọ bụla nwere anya anya dị ka akara ọma, ahịhịa, ahịhịa akpịrị, foto na ịdọ aka ike na omimi chọrọ.
ihu inwego fractional micro agịga igwe Gold fractional RF microneedle
Sistemụ irighiri RF site na imepụta pụrụ iche nke ọtụtụ ngwugwu agịga dị elu, njikwa ọsọ dijitalụ na-achịkwa site na epidermis na dermis ziri ezi iji chịkwaa omimi nke 0,5-3 mm, ọzọ site na njedebe nke agịga lattice hapụ RF, kpalite collagen na na-agbanwe anụ ahụ, ọ bụghịkwa mmebi anụ ahụ oyi akwa nwere. Mgbe anụ ahụ site na usoro a, akwa epidermal dị mma, ike RF nwere ike ịbanye n'ime dermis ahụ, kpalite hyperplasia protein collagen, ọ bụghị naanị ụzọ kachasị mma iji melite ọnya ahụ, kamakwa ọ na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ogologo oge mee ka ihe dị mma usoro.
Microneedle Machine RF MFR SFR Microneedle Fractional Machine Intracel RF Micro lingchọta
Microneedle RF Mkpokọta RF Usoro ọgwụgwọ MFR Collagen ọgwụgwọ
Mgbe etinyere ya na anụ ahụ, n'okpuru ọgwụ mgbochi ọrịa mpaghara ma ọ bụ nke na-adịghị ahụ anya, a na-eji Micro-agịga dị ọcha mepụta ọtụtụ ọwa microscopic miri emi na dermis nke anụ ahụ, nke na-akpali ahụ gị iji mepụta collagen ọhụụ iru mmeghari anụ ahụ, si otú ahụ na-eme anụ ahụ gosipụta dị ọhụrụ ma dị obere. Gwara mmanụ & Nke a na - ekepu ọgwụ agwaghị agwa tinye oge na - enye nchekwa na - ewepụta ikike na - ewepu ya na epidermis ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Hot ire 2021 redio ugboro ole na ole microneedling RF akpụkpọ tightening igwe
SFR Collagen Ntinye Ọgwụ
Uzo di iche iche nke SFR na-enye ike RF n’ime Epidermis na akwara dermis nke nwere mmetụta synergistic, na-ebute akpụkpọ anụ na-achịkwa.
Usoro ọgwụgwọ nke ọnya site na ike RF Ebe ọ bụ na a na-echekwa Micro-needles ma e wezụga akụkụ ọnụ (0.3mm), Micro-agịga electrodes anapụta bipolar ike ozugbo n'ime dermis na-enweghị mmebi na epidermis. Obere mmekpa ike ọkụ nke RF na-emepụta electrocoagulation nke pere mpe na dermis nke na-akwado usoro ọgwụgwọ nke ọnya. WHM na-akwalite nhazighari nke collagen na mkpịsị aka ọnya, nke na-eme ka laxity anụ ahụ dịkwuo mma. Ọ bụghị naanị na-akpali ịmegharị ahụ ma na-egbochi ọrụ mmechi nke sebaceous iji meziwanye ihe otutu.
Pinxel Fractional RF Microneedle Ngwaọrụ nwere agịga / inshọransị akwadoro ọkọlọtọ redio ugboro rf igwe maka ihu
Pinxel microneedle RF igwe ụkpụrụ:
–PINXEL microneedle RF igwe na-enye ọkụ ọkụ ma epidermis na dermis na oke omimi na-achịkwa na-akpaghị aka site na 0.5mm ruo 3mm.
–Ọdịnyere Frequency Radio nke na - arụ ọrụ nke ọma na - enyere ike inweta usoro ọgwụgwọ na - aga n’ihu.
–Ọ na-emefu omume gị site na ịnye nsogbu dị ntakịrị nke nkwụsị na mgbu n'agbanyeghị ụdị akpụkpọ ahụ.
Pinxel-2 Microneedle RF na Fraịkal RF igwe
acha uhie uhie microneedle rf ngwaọrụ sanhe CE technology RF fractional RF ịgbatị akara mwepụ microneedle igwe
1. Acne ጠባ mwepụ, ndọlị mwepụ
2. Iwepụ akara mwepụ
3. Nnukwu Mbelata Ọgba, mmegharị akpụkpọ ahụ
4. Ihu ihu, akpụkpọ tightening, akpụkpọ Resurfacing
5. Pigmentation mwepụ.
Co2 Fractional Laser Machine, Ọrịa Co2 Laser, Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu, Ems Akwara mkpali Machine, Shr Ipl Opt, otutu mwepụ mwepụ,